DaVinci Resolve Studio Manohana ny alàlan'ny famokarana asa-tanana lavitra an'ny kiraro mahafinaritra | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » DaVinci Resolve Studio Manohana ny workflow amin'ny famokarana lavitra an'ny kiraro mahafinaritra
Fremont, CA - Febroary 19, 2021 - Blackmagic Design androany dia nanambara fa ny Senior Colorist Maria Carretero avy amin'ny studio famoronana Nice Shoes dia nanala avy hatrany ilay sarimihetsika “Waikiki” nahazo loka tamin'ny alàlan'ny DaVinci Resolve Studio, miaraka amin'ireo tetikasa miavaka toa ny horonantsary mozika "Lost Horse" sy ny horonan-tsary Sundance 2021 "All Light, Everywhere. ” Nice Shoes dia niantehitra tamin'ny DaVinci Resolve Studio ho ampahany amin'ny dalany fiasa lavitra nandritra ny taona 2020 manerana ny toerana New York, Toronto, Boston, Chicago ary Minneapolis.
"Waikiki", sarimihetsika mampiavaka ny Hawaii mpanatontosa sarimihetsika ary ny mpiara-miasa amin'ny Lab any Native Institute any Sundance, Christopher Kahunahana, dia manome topy maso tsy hita maso momba ny zava-misy mahatsiravina amin'ny fiainana any paradisa. Nandritra ny famokarana lahatsoratra, Carretero dia niorina tao New York niaraka tamin'ny mpamokatra Digital Inter Mediate (DI) Katie Hinsen ao Los Angeles ary Kahunahana any Hawaii. Niara-niasa ny ekipa tamin'ny rohy video azo antoka sy miloko azo antoka noforonin'i Nice Shoes. Noforonina tany am-boalohany ho an'ny mpanjifa dokam-barotra, ny teknikan'ny Nice Shoes dia nodiovina hamaly ny fitakiana tsy manam-paharoa amin'ny areti-mifindra ary hivelatra amin'ny tetikasany momba ny sarimihetsika sy ny fizarana.
Araka ny nomarihin'i Hinsen, “Matetika dia manana mpanjifa vitsivitsy monja isam-bolana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fandehanana lavitra isika, saingy izao dia saika ny rehetra. Izahay koa dia nanana ny ankamaroan'ireo fotoam-pivoriana natokana ho an'ny trano, saingy nampitomboinay ny fananana ny mpanakanto sy ny mpanjifa ao an-tranony, samy mampiasa rohy fijerena loko azo antoka amin'ny mpanara-maso azy ireo mba hijerena ny vokarin'ny DaVinci Resolve Studio.
Notohizany hoe: “vitsivitsy amin'ireo tetikasanay, nanomboka tamin'ny taon-dasa ka hatramin'ny 2021, dia mampiasa ny fiarahamiasa miaraka amin'ny DaVinci Resolve Studio, izay nifameno tanteraka tamin'ny fivezivezena lavitra nataonay. Tena manampy antsika hampiasa tsara ny loharanon-tsainay izany, satria ny mpanampy anay sy ny tonian-dahatsoratra an-tserasera dia afaka miditra amin'ny tetikasa rehetra amin'ny milina rehetra amin'ny fotoana rehetra. Alohan'ny handehanany lavitra, ny mpanampy iray dia niditra tao amin'ny efitranon'ilay mpandoko loko ary nandatsaka tifitra ho an'ilay filaharana. Ankehitriny, afaka miditra amin'ny fandaharam-potoana izy ireo na aiza na aiza misy azy ireo ara-batana eo amin'izao tontolo izao. Namela anay hampiasa tsara kokoa ireo ekipanay amin'ny toerana sy faritra zana-potoana samihafa, izay tena nilaina tamin'ny tetikasa toa ny 'Waikiki.' ”
Tetikasa lavitra iray hafa vao haingana izay niandraiketan'i Carretero ny horonantsary mozika "Very Horse" an'i Asaf Avidan. Tsy ny tetik'asa ihany no nitifitra ary navoaka lavitra nandritra ny quarantine niaraka tamin'ny Tale Adi Halfin monina any Berlin, fa araka ny nomarihin'i Carretero, Halfin dia manana tsiro manokana rehefa miresaka momba azy. "Mitady zavatra marefo be foana izy, noho izany asa be dia be ny fampifangaroana ny haavon'ny saturation sy ny fahazoana vaovao ao anaty alokaloka mba hahatsapanao fa afaka miaina ny rivotra misy ilay sary ianao," hoy izy.
"Ny DaVinci Resolve Studio dia fananana lehibe ho an'i Maria sy ireo mpandoko maro loko hafa. Ny fitantanana ny loko sy ny fitaovan'ny fiaraha-miasa dia nanjary fitaovana lehibe satria nanitsy sy nanadio ny fizotranay izahay nandritra ny fiaraha-miasa tamin'ireo mpamokatra sarimihetsika manerana an'izao tontolo izao, "hoy i Hinsen namarana. "Na dia takatry ny rehetra aza ny zava-misy tamin'ny taon-dasa, ny DI remote dia tsy zavatra fanaon'ny mpanjifa manasongadina ny ankamaroany, ary ny DaVinci Resolve Studio dia nanampy anay tokoa tamin'ny famoahana ireo mpino tamin'ny mpanjifanay."
Sary avy amin'ny DaVinci Resolve Studio ary ny hafa rehetra Blackmagic Design entana dia hita ao amin'ny www.blackmagicdesign.com/media/images
Blackmagic Design DaVinci manadihady Studio 2021-02-19
Previous: Comprimato JPEG2000 codec tafiditra ao amin'ny sehatra Interra Systems 'File QC
Next: MOD dia manomboka ny antoko amin'ny lalao goavambe